AMD Ryzen C7: runyerekupe runoshamisa kwazvo kuti inogona kunge iri bhomba | Linux Vakapindwa muropa
Ko kana iwe uchigona kuve ne AMD Ryzen uye Ray Yakateedzerwa GPU pane yako Android kifaa?
Runyerekupe rwasvetuka mumazuva apfuura rwunobva pamufananidzo wakatumirwa panzvimbo inodonha pamusoro peanofungidzirwa patent yeCPU nyowani yemafoni nhare. Izvi zvinogona kuita kunge chinhu chakajairika, asi kana ndikakuudza kuti iyo CPU ichave iri AMD Ryzen uye ine simba GPU ine Ray Tracing, ipapo kukanganiswa kwenhau kunogona kuve kwakakwira zvakanyanya.
Unogona here kufungidzira uine mudziyo Android nhare inokwanisa kuita zvakanyanya uye GPU inokwanisa kukuratidza yakanakisa giraidhi yemitambo yako yemavhidhiyo? Unogona here kufungidzira simba rakapihwa naRay Tracing iro idzva Xbox kana PS5 richava naro parunhare? Zvakanaka, kana iyi AMD Ryzen C7 SoC yakasimbiswa uye haisi kungoita runyerekupe, saka haufanire kuzvifungidzira, nekuti ichave chaiyo ...
Sezvauri kuona mumufananidzo wakaburitswa, inofungidzirwa AMD Ryzen C7 inoonekwa uye mamwe ehunyanzvi hunhu hwavaizove nahwo. Mune mawonero angu, inoratidzika kunge yekunyepedzera pane chero chinhu. Kunyangwe zvichizodikanwa kuve wakangwarira kuitira kuti pakupedzisira zvaisave. Inogona kunge iri jee kana nhau dzenhema dzinoenderana nekubatana kunozivikanwa pakati Samsung ne AMD ndatozivisa kare, asi mune iyo kesi ndinopokana kuti inogadzirwa neTMSC, sezvo Samsung iine yayo yekutanga.
ari maitiro ehunyanzvi iwe waunogona kuona ndeaya:
Zita: AMD Ryzen C7. Izvi zvinogona kufungira, sezvo C7 iri VIA brand, uye ini handina chokwadi chekuti yakadanwa kudaro. Uye zvakare, kana iri Samsung SoC, chinhu chakajairika ndechekuti inoramba ichinzi Exynos.
Nuclei: ihombe.CHIDUKU chinoshandisa 8 cores. 2 yakakwira-kuita ARM Cortex X1 yakavakirwa 3Ghz uye inonzi Gaugin Pro Mobile, nyowani nyowani iyo isiri yeayo AMD kana Samsung parizvino, uye zvinoita sekushamisa… Ndicho mhedzisiro yeasipo ARM-based AMD K12? Ini handina chokwadi nazvo, izvi zvaive zvakanangana nemaseva uye yakashandisa ARM Cortex-A57 cores pasina shanduko. Kune rimwe divi, zvakare ine maviri mamwe epakati epakati mashandiro macores anonzi Gaugin Mobile musimboti yakavakirwa paARM Cortex A2, uye imwe 78 yakaderera kuita / kudyiwa ARM Cortex A4. Masumbu aya anoshanda pa55, 3 uye 2.6 Ghz zvichiteerana.
Nzira: iyo node yakashandiswa yaizove iyo 5nm kubva kuTSMC, inoenderana nezviri kuitwa ne AMD izvozvi pakusarudza hwaro uhwu muTaiwan, asi izvo zvaisazoita zvine musoro mune yekuve mubatanidzwa weSoC neSamsung.
GPU: kune kutaura kwe AMD RDNA2 ine Ray Tracing uye 45% kuita kwakawanda kupfuura iyo Qualcomm Adreno 650. Chikara chaicho chemitambo chingave chinonakidza kwazvo, uye ichave iri yekutanga mobile GPU ine chaiyo-nguva Ray Kutsvaga kumhanyisa ne Hardware .
Zvakare, sezvaungaona mupepa rakaburitswa raizove naro rutsigiro rwe5G, nezvimwe. Pasina kupokana zvinhu zvinokatyamadza zvekuti kana ichokwadi kuve chimurenga, kunyangwe zvisiri zvechokwadi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Ko kana iwe uchigona kuve ne AMD Ryzen uye Ray Yakateedzerwa GPU pane yako Android kifaa?
RecApp: imwe yeakareruka rekodhi rekodhi iwe aunowana paLinux iri paFlathub